मर्नुभन्दा ठीकअघि के सोच्छ होला मान्छेको दिमागले ? | Ratopati
मर्नुभन्दा ठीकअघि के सोच्छ होला मान्छेको दिमागले ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २९, २०७४ chat_bubble_outline0
मर्ने समयमा कसैको दिमागमा के हुन्छ होला ?
कसैसँग यसबारेमा सटिक जानकारी छैन । वैज्ञानिकहरूलाई केही जानकारी अवश्य छ । तर यो सवाल अन्ततः एक खोजको विषय बनेको छ ।
यद्यपि हालसालै केही वैज्ञानिकहरूले एक यस्तो अध्ययन गरेका छन्, जसबाट मृत्युका तन्त्रिका विज्ञानका बारेमा ध्यान दिन योग्य जानकारी पाएका छन् । यो अध्ययन बर्लिनको चेरिट विश्वविद्यालय र ओहायोको सिनसिनाटी विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले जेन्स द्रेयरको नेतृत्वमा गरेका हुन् ।
यसका लागि वैज्ञानिकहरूले केही बिमारीको तन्त्रिका तन्त्रको सूक्ष्म अध्ययन गरेका हुन् । यसका लागि उनीहरूका परिवारबाट अनुमति मागेका थिए ।
यी वैज्ञानिकहरूको शोधभन्दा पहिला ‘ब्रेन डेथ’को बारेमा हामी जति जान्दछौँ, त्योभन्दा बढी जानकारी हामीले पशुहरूमा गरेको प्रयोगबाट मिल्यो ।
हामीलाई थाह हुन्छ मृत्युको समयमा शरीरमा खुनको प्रवाह रोकिन्छ र यसका लागि दिमागमा अक्सिजनको कमी हुन्छ ।
सेरेब्रल इस्किमया नामको यस्ता स्थितिमा आवश्यक रासायनिक अवयव कम हुन्छ र जसले दिमागमा ‘इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी’ पूर्णरूपमा सकिन्छ ।